Sirta lama filaanka ah ee ku qarsoon qosolka - BBC News Somali
Sirta lama filaanka ah ee ku qarsoon qosolka
Image caption Qosolka waa mid aan mar walba xaddidneyn
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qosol loogu jawaabay markii uu bishii Sitembar ee sannadkii 2018-kii golaha Qaramada Midoobay u sheegay inuu qabtay wax ka badan howlihii ay qabteen "Ku dhawaad maamul kasta" oo soo maray taariikhda dalkiisa.
Mr Trump ayaa markii dambe qirtay in uusan "filaneynin" falcelintaas - laakiin wuxuu sheegay in uusan "wax dhib ah u arkin".
Taasi waxay ahayd mid ka mid ah tusaaleyaasha faraha badan ee muujinaya in ay dadku qoslaan.
Inta badan waxyaabaha lagu qoslana ma aha in qof gaar ah uu wax lagu qoslo sheego.
Khubaradu waxay sheegaan in qosolka uu ka dhex abuurmo bulshada; waxaa suurta gal ah in markii aan kali nahay ay adagtahay inaan 1 jeer ka badan qosolno laakiin tiro 30 jeer taas ka badan aan qosolno markii aan dad kale la joogno.
Haweenka Soomaalida ee maaweelooyinka ku sameeya baraha bulshada
Qosolku waa mid ka mid ah waxyaabaha dabiiciga ah ee ay bani'aadanka inta ugu badan ka sameeyaan.
Waxaa xitaa daraasado badan lagu sheegay in xayawaannada qaar ay qoslaan, sida daanyeerrada iyo jiirka.
Image caption Seynis yahannada ayaa sheegay in Daanyeerrada noocan ah ay sidoo kale qoslaan
Marka uu jiir dhowr ah ciyaarayo waxaa laga maqlaa codad ay dadka seynis yahannada ah ku micneeyeen qosol.
Waxaa dhawaaqaas lagu ogaadaa in ay ciyaarayaan oo aysan dagaallameynin.
Haddiiba uu jiirka dabeecaddaas leeyahay, wax lala yaabo ma aha in bani'aadanku ay lacag ku bixiyaan iney qoslaan.
Waxaa jira dad xirfaddoodu ay tahay iney dadka ka qosliyaan isla markaana kharash uga qaataan.
Waxaan qosolka u isticmaalnaa inaan ku xoojinno xiriirkeenna dhinaca bulshada.
Waa astaan la isku fahmo isla markaana lagu kala ogaado dadka is yaqaanna iyo kuwa aan aqoonta isku lahayd.
Qosolku wax xuduud ah ma laha wuxuuna imaan karaa iyadoo la joogo meel kasta ama lagu sugan yahay xaalad walba, xitaa ha ahaato mid siyaasadeed.
Maxaan u qosolnaa
Qosolku waa cod aan micno sameyneyn oo kasoo baxa afkeenna wuxuuna leeyahay astaan si fiican loogu garan karo inuu qosol yahay.
Codka dhawaaqa ah ee naga soo baxa marka aan qosleyno wuxuu aad ugu egyahay midka ay sameeyaan daanyeerrada afka qalaad loogu yaqaanno Ape.
Dhawaaqan wuxuu aad uga duwan yahay hadalka, carrabka iyo bishimahana waxay u muuqdaan ineysan wax dhaqdhaqaaq ah sameyn marka uu qofka qoslayo.
Laakiin dhawaaqyada kale ee afka ka soo baxa, sida hadalka, waxay la shaqeeyaan carrabka iyo faruuryaha.
Xitaa dhanka ekaanshaha, qoslku uma eka dhawaaqa hadalka. Wuxuse aad ugu egyahay codka ay sameeyaan xayawaanka loo yaqaanno naasleyda.
Inkastoo aysan seynisyahannadu wali si rasmi ah u ogaanin sababta uu qosolka codkaas u leeyahay, haddana waxaa suurta gal ah in taasi ay ka mid tahay hababka ugu sahlan ee aan si fudud cod ugu sameyn karno.
Marka uu ruux qoslayo, waxa kaliya ee uu sameynayo waa inuu hawo gudaha u qaato ka dibna uu si xooggan u soo saaro.
Xitaa carruurta indhooleyaasha ah iyo kuwa dhagaha la' wey qosli karaan markii la kilkileeyo.
Faa'iidooyinka uu qosolka leeyahay waxaa ka mid ah inaan u adeegsan karno xakameynta xaaladaha adag ee na soo mara.
Isla sida madaxweyne Trump loogu qoslay isagoo ku sugan xarunta Qaramada Midoobay, waxaa jiray dhacdooyin kale oo ku saabsanaa qosol yimid xilli siyaasadeed isla markaana dhaliyay hadal heyn baaxad leh.
Image caption Shirka jaraa'id waxaa si wada jir ah u qabtay madaxweyneyaashii Mareykanka iyo Ruushka
Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Bill Clinton ayaa si weyn loogu xasuustaa in hadda ka hor uu munaasabad shir jaraa'id ah, oo uu la yeeshay madaxweynihii hore ee Ruushka Boris Yeltsin, ka dhigay dhacdo la yaab leh oo soo jiidatay warbaahinta guud ahaan caalamka.
Mr Clinton ayaa isagoo garab taagan dhiggiisa Ruushka wuxuu u qoslayay sidii inuu Mr Yeltsin ula kac u sheegayo waxyaabo lagu qoslo oo maadeysi ah.
Hase ahaatee Mr Clinton ayaa markii dambe u muuqday inuu iska dhigayo qof aan si gaar ah ugu qosleynin madaxweynaha Ruushka.